eReaders na ebook: Ihe niile gbasara ọgụgụ dijitalụ na ndị na-agụ elektrọnik | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Ihe niilendị na-agụ akwụkwọ
Ndị na-agụ akwụkwọ: ndị na-agụ electronic
Anyị bụ otu ebe nrụọrụ weebụ nwere ọkachamara na ndị na-agụ akwụkwọ na ọgụgụ dijitalụ. Anyị na-enyocha ma nwalee ụdị niile dị na ahịa ma anyị na-agwa gị gbasara ike na adịghị ike ha.
Onye kachasị mma?
Ajuju ajuju. Y’oburu n’ichọ ka anyi ruo n’isi, anyi na akwado 2.
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịnọ ruo ụbọchị, ndị a bụ akụkọ kachasị ọhụrụ anyị bipụtara ndị a bụ akụkọ kachasị ọhụrụ site na ụdị ndị dị n’ahịa na ụwa nke dijitalụ ebipụta na ọgụgụ na kọmputa usoro.
Kindle Paperwhite (2021) - Nyochaa
SPC Dickens Light Pro - ezigbo ụzọ ọzọ dị ọnụ ala [Analysis]
Kobo Sage, nzọ nwere akwụkwọ ọdịyo na stylus [Analysis]
Nyocha banyere ngwaọrụ niile
Anyị na-anwale na anyị na-enyocha onye ọ bụla e-agụ nke ọma, ruo izu, iji gwa gị ezigbo ahụmịhe nke iji ngwaọrụ ọ bụla dị.
Isi okwu anyị bụ na anyị anwalela ọtụtụ na anyị nwere ike iji ha tụnyere ma gwa gị ike na adịghị ike nke onye ọ bụla ma e jiri ya tụnyere asọmpi ya.
Amazon unu si n'ihe unu, ụlọ ọrụ, ndị na-agụ akwụkwọ, Hardware
ndị na-agụ akwụkwọ, Hardware
Ihe niile banyere Amazon na gị Kindle
O doro anya na Kindle bụ taa ngwaọrụ ndị na - agụkarị. Ya mere, anyị hapụrụ gị nke a Obiọma pụrụ iche, na ọtụtụ nkuzi na aghụghọ ka i wee nwee ike ị nweta ọtụtụ uru na ebook Amazon gị.
Kindle Oasis, ugbu a na ...
Otu esi eme ka ihe nchọgharị weebụ anyị na-aga ngwa ngwa (na gịnị kpatara na ị gaghị eme ya)
Nkuzi: budata akwụkwọ maka ngwa Kindle dị maka ekwentị mkpanaaka na mbadamba
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịzụta ihe na-esochi ozi nke na-esote ya ndị na-ege ntị ọ ga-enyere gị aka
Na-atụ aro Ngwaọrụ
Onye kachasị mma na mma - ọnụahịa
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka uru maka ego, anyị na-aga n'ihu ịkwado Kindle Paperwhite dịka onye na-agụ ihe kacha mma
Ọ bụrụ n ’ịchọrọ inyocha ụdị ndị kachasị adọrọ mmasị bụ ndị dị n’ahịa ugbu a, lee ndị anyị tụrụ aro
Tụnyere nke kacha mma eReaders
Ebe nchekwa / Expandable
Gbasara akwukwo Paperwhite 6" 300dpi Ee Ee 4Gb / Mba 129.99 €
Kobo Aura H2O 6'8 " 300dpi Ee Ee 4Gb / Ee 201 €
SonyPRS-T3 Size 300dpi Mba Ee 2Gb / Ee 222 €
Isi 4 6" 166dpi Mba Ee 4GbNa 79.99 €
Kobo Aura Otu Size 300dpi Ee Ee 8Gb / Ee 227 €
Bq Cervantes 3 6" 300dpi Ee Ee 8Gb / ee 139.90 €
Obi iru ala 6" 300dpi Ee Ee 4Gb / Mba 189.99 €
Ọdịdị Omenala 6" 300dpi Ee Ee 4Gb / Mba 289.99 €
Ihe dị mkpa na ereader / ebook
Njirimara nke afọ ndị gara aga anyị nyochapụtara iji kpebie nke e-agụ ga-azụ agbanweela. Ya mere, taa ọkụ bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ, ebe afọ ole na ole gara aga, anyị echeghị na ọ nwere ike ịbụ.
Ya mere, gịnị ka anyị kwesịrị ịchọ na 2019 ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụta ma ọ bụ họrọ onye na-agụ ihe?
Dị ka ọ dị n'ihe niile, anyị kwesịrị iburu n'uche nzube anyị chọrọ inye ya.
Ihuenyo na mkpebi
Ihuenyo nke ndị na-agụ akwụkwọ oge ochie abụwo 6 'na ụdị ugbu a na-aga n'ihu na nha ahụ. Mana enwere otutu ndi ohuru ohuru, tinyere 8 na 10 ″.
Onye na-agụ akwụkwọ 6 is nwere ike ijikwa ma dị mfe ibufe. ọ na-adị ntakịrị mgbe anyị jidere ya. Mana 10 ″ ma ọ bụrụ na anyị ebugharị ya, ọ na-enye anyị ahụmịhe dị ụtọ.
Maka mkpebi ahụ ugbu a ndị na - agụ akwụkwọ kachasị elu na - arụ ọrụ na 300 dpi (pikselụ kwa inch) na ndị ọzọ nwere isi nwere 166 dpi. Na nke a, ọ ga - akawanye mma n'ihi na anyị ga - enweta nkọwa ka mma
Ọ bụ njirimara kachasị ọhụrụ ma ọ bụ arụmọrụ nke agbakwunyere na ndị na-agụ e-agụ. Ọ nwere ike ime mgbanwe na nzụta gị. Igwe ọkụ na-adịghị mma ga -emepụta onyinyo ma nye gị ahụmịhe agụghị akwụkwọ.
Ndị na-agụ akwụkwọ nwere ọkụ ebe a ka ha nọrọ, ọfụma na ha bịara ogologo oge gara aga, mana ugbu a, akwụkwọ ntanetị ọ bụla etinyegoro ya. Ndị a ma ama ejirila ya rụọ ọrụ na ndabara ma ndị obere ka ha nwee asọmpi enweghị nhọrọ ọ bụla ma ha gụnyere ya na ụdị ha niile.
Ọkụ bụ otu n’ime ihe na-eme ka ndụ ereader batrị dị mkpụmkpụ.
Na sistemụ arụmọrụ, a na-ahụ ha dị iche iche na otu 2, ndị nwere sọftụwia nke ha na ndị na-eji gam akporo, nke bụ otu n'ime mmepe ọhụụ nke ọtụtụ ụdị na-esonye.
Ruo ugbu a onye ọ bụla na-ege ntị na-arụ ọrụ na ngwanrọ nke ya, Kindle na Kobo mara mma nke ọma na enyi na enyi. Ma ruo oge ụfọdụ na karịsịa na ụdị ndị a na-amachaghị nke ọma ha malitere iji gam akporo na-enye ha ohere (ma ọ bụrụ na ha na-agba ya nke ọma) ijide nnukwu ụdị na nke a.
Uru nke gam akporo na igwe ihe di otutu:
Anyị nwere ike iwunye ọtụtụ ngwa nke na-abawanye ọrụ na ohere nke onye na-agụ anyị. Na-agụ ma gụọ ya ngwa ndị ọzọ dịka Getpocket, Instapaper, wdg. Anyị nwere ike ịwụnye ngwa Kindle na Kobo ma nweta akaụntụ anyị na nyiwe ndị a.
Ihe anyị kwesịrị ịkpachara anya bụ ịga were were. Andorid na ereader na obere ike, ha na-aga jerks ma mepụta ahụmịhe na-adịghị mma.
Mana ọdịnihu nke ọtụtụ ụdị ga-esoro gam akporo iji nwee ike ịsọ mpi na ndị ukwu.
Ndị Akara akpọrọ akpọrọ akpọrọ aha mgbe anyị na-ekwu maka ndị na-agụ akwụkwọ, ndị bụ ndị na-egosi na ha dị mma ma nwekwaa mbara igwe Ngwurugwu Amazon y Kobo nke Rakuten dere.
Mgbe ahụ enwere ọtụtụ Nook, Tagus, Tolino, BQ, Sony, Likebook, Onyx. Anyị nwere ngalaba pụrụ iche maka nke ọ bụla n’ime ha ma anyị chọrọ ka ị chọpụta ihe onye ọ bụla n’ime ha nwere ike inye gị.